musha >Products >PVC fence
PVC fence - pamwe chete inonzi vinyl fence - inoitwa fekitari inobva kuvinyl polymer (PVC), ipurasitiki inosanganiswa nemidziyo-michina kuti ipe PVC cheni yaro ruvara rwakasiyana, mavara, kusagadzikana kusagadzikana, kushanduka uye kugadzikana. PVC cheni yakaisvonaka, yakadzika-kuchengetedza yakasiyana nematanda ekudzivirira. Danda rehuni rinofanira kurapwa, kuvezwa kana kucheneswa zuva rega rega; Zvechokwadi, iyo inofanirwa nemapuranga emudziyo inotarisira kubhadhara nguva uye mari yekupenda kana kushatisa makore mashomanana oga kutarisira fence yekutarisa nekuchengetedza huni kubva pakushambidzika kwemhepo. Danda rakasununguka kune mamiriro okunze rinogona kupera nekufamba kwenguva, zvichiita kuti pambo risina kugadzikana ne nguva shoma.
Apo rinosanganisira kugadziridza ikozvino hazvibviri kukanganwa PVC nokuti inouya nechinosvika makumi matatu gore gore pledge, ne'er inoda kuvepa, haingazoori kana mafudu uye haichazopindi.
Kuonekwa kwemazuva ano kwePVC fence kunoshamisa zvikuru, uye kwakananga kunowedzera hutano uye kunaka kune pfuma yako.
Izvo zvakasiyana iye zvino zvinosanganisira PVC dzimba yakachengetedzwa yakachengetedzwa, uvha hwehupfumi hwePVC, masvingo ePVC picket, uyezve nokuti pVC mushure mekuvhara, iyo inoratidzika kunyange inonakidza munzvimbo yekugara kana kumaruwa.
PVC fences ingada kusaregererwa kugadzirisa uye kuenda nenzira dzakawanda izvo. PVC fence isarudzo yakakwana. A vinyl PVC cheni yakasimba kudarika feni yekotetti inobatanidza murwi wakazara unobatanidzwa uchiita pane imwe simbi.Ichashanda kunze kunze sezvo yakasimba uye inogara kwenguva refu.
Yedu vinyl fence yakanaka kana uri kuedza kutsvaga fence yekuchengetedza yakaderera kunakidza pfuma yako. Kune zvipo zvakasiyana-siyana zvePVC Fence Installation, pamwe chete nemuvara wepaimba - saka isa pasi iyo bharuti yepende! Vinylini yako fence inogona kunge inoda imwe shati yepende, uye haigoni kupisa kana kuora. Izvi zvinopedza nyaya dzakawanda uye kugadzirisa kwakabatana nemamiriro ekunze uye nguva. Iyi fence yakasimba ndeye uchapupu hunopesana nekukuvadza kubva pakusvibiswa kwemweya, uye haigoni kuwirirana kana kutungamirira magetsi. Kana iri fence inenge ichitsungirira mamiriro ekunze uye kunze kwechimwe chimwe sarudzo dzinoshandiswa fence, sarudza PVC Fence Installation.
Vanhu vazhinji vanosarudza PVC fence Installation nokuda kwepamusoro pezvikonzero, zvisinei nekuwedzera nekuda kwekutarisa kwayo kwakanaka. Vinyl fence iri kukura muhutano semugumisiro waro inopa kuchengetedza, yakavhara, uye chimiro chisinganzwisisiki. Kugadziriswa kwevinyl fence kunoda zvishomanana kudarika chikwata chekutengesa uye hovha. pane kugara uchigadzirisa uye kupora fence yako, iwe uchabhadhara nguva uchifarira yadhi yako nekusarudza PVC Fence Installation.
Zvinyorwa zvedu zvevinyl ishamwari-e-friendly uye zvinogadzirwa zvezvegadziriswa uye zvisingasviki zvinhu. Zvinouya mumhando dzakawanda uye zvirongwa zvinopihwa kuti zvizadzise zvaunoda iwe.
Izvo zvine chokuita nekuvhara ndezvekuti, kana iwe uchitanga kushamisika pamusoro pokuwana izvo zvaitwa, unoziva kuti imba yako haigoni kufungidzirwa yakakwana asi kwete. asi iwe uri kufunga nezvechinhu uye zvinhu zvakasiyana-siyana zvaunongofanira kungoramba uri mupfungwa asi uchifungisisa nzira chaiyo yekuisa muzhenje, kugadzirisa ndeimwe yepamusoro-soro, nokuti ndicho icho chinoita kuti nguva yakareba yakachengetwa uye yakasununguka zviitiko zvenguva yakakodzera ye hassling kugadziriswa kunobatanidza mabasa epamba.
Nhau dzakanaka ndeyokuti isu tinopa zvinyorwa zvakajeka zvakapiwa PVC vinyl fences. Vinyl yakakurumidza kubuda nokuti inofarira kwezviverengeka, nokuti iyo huru yekutsvaga yekuvhara. Low kugadziriswa uye kugoneka kwemahombe akasiyana-siyana maitiro ari 2 zvinhu zvinokonzera kukanganisa!
Inofananidzwa nehuni, vinyl haifaniri kuiswa pairi uye haisi pasi pekudengenyeka, kuisa ushamwari uye kugadzikana zvakasimba.
Muchena uye Musha vinyl uroyi ndiyo 2 inonyanya kufarira marudzi ehutu hwekuvhara, tichapa hukuru hwepamusoro, kukwanisa kugadzirisa uye kushandiswa kwekunyoreswa kweumwe neumwe mukusarudza kwemavara, maererano nechiyero uye maonero eimba yako uye zvaunoda.
Kuva neimba yako pachako kunogona kuva nyaya yakanaka uye inoenderera mberi mari. sarudza PVC vinyl nokuti zvinhu zvinopinda mukusika rusvingo rwepfuma yako, uye taura zvakanaka kune mari inowanikwa nekuda kwekuparadzwa kwemazuva ako.
Pasinei nokuti uri kutsvaga mumiririri wepamusoro kana kuti zvigadzirwa zvekunaka, tinowanzova nePVC vinyl fence iwe unofarira. Kubvira pamakamuri makuru kusvika kumapuranga akazaruka kusvika kumatare machena uye mushure-uye-nesimbi, tinowanzopa nzvimbo yakakura yefence yakagadzirirwa uye masuwo ekukubatsira kuti uite oasis inotapira pamba pako, dziva kana jindu.
Kubatsira kwePVC Vinyl Fencing:
PVC Vinyl fencing inogona kuva yakanaka kwazvo. uye kubva zvavari kuita kwete kupera, kuvhara kana kuputika uye zviri nyore kwazvo kuti [kugara] vakachena vanogara vakanaka.
Tine marudzi mana emasvingo ekugadzirisa kubva pakusanganisira:
5.Ungagona kubatanidza shamwari yejiyando yedu nechiteshi.
6.Zvose zvipfigiro zvinowanikwa mumuchena mutsvuku
7.Almond (tan), Wannn, uye grey fence mumusika mune zvigadzirwa zvakasimba.
Low Maintenance uye Durable:
1.Kutanga, tinowanzotanga nePVC vinyl iyo inogona kuora, kuparara, kupera, kupatsanurana, kana kuti warp.
2.PVC inomiririra mamiriro okunze, kunyange makumi maviri nemakumi maviri pondo. puppy, uye haazoperi, mafungu kana tsvina uye ne'er inoda kuvepa.
3.PVC vinyl ndeyekuti inonyanya kuzivikanwa pamatare munzvimbo dzegungwa pose pose paine kukosha kwakanyanya kune mvura yakaoma yemunyu nemhepo.
4.Kana iri kuita zvakanaka pamahombekombe, ichaita zvakanaka chero nzvimbo.
5.Better Kupfuura matanda Masvingo
Izvo chete, mapurisa ePCV akareba kupfuura masvingo akagadzirwa kubva pamatanda.
PVC vinyl yakasimba kudarika huni uye inogona kusimuka kumamiriro ekunze.
Chinonyanya kukosha, PVC vinyl haifaniri kunyanya kuchengetedzwa. Inongoda kunyorerwa nyore nyore nesipo nemvura. Enzanisa izvozvo nehuni, iyo inoda nguva yakaoma, inodhura uye inoramba ichigadziriswa sekupenda, kushatisa, kugadzirisa nekugadzirisa.
1. Fence kuiswa
Kuisa fence kunofanira kugoverwa maererano nekufambira mberi kweprojekiti uye kunofanira kuzadzikiswa kusati kwatanga kufambiswa kwechikamu ichi cheprojekti.
Kuisa fence kunofanirwa kuva yakanaka uye yakagadzikana, mamiriro ezvinhu haafaniri kuvhara magwagwa nevanofamba-famba kuburikidza nemutemo, kuwedzera kune gedhi uye kubuda kunofanira kuvharwa kusingagumi, kuve nechokwadi chokuti webusaiti yekuvandudza uyewo kunze kwekunze, fambo inofanira kuita basa rakatendeseka rekufamba kwemigwagwa, kuvaka kunofanira kusarudzwa kuti ichengetedze mutemo wekufamba. Fence nzvimbo haibvumirwi kuunganidza zvakapoteredza tsvina, zvinhu zvekuvaka uye mamwe marara, uye kuva nechokwadi chokuti uhu hwehutsanana.
2. Sarudza zvinhu
Sarudza ruvara, uwandu nekukwirira kwecheni muchitsika pamwe neprojekti. ingave kana kwete pombi yesimbi inodiwa kutsigirwa, nezvimwewo.
3. Kureba kweFence
Iro cheni pachinangwa chekutsvaga ndechimwe chikamu che-0m kumusoro uye zvitatu.0m yakafara.
4. kuchinja kwenyika
Kuvaka pamusoro pefambo kuchinja kushandiswa kwehurumende, kushidzira zita remabhizimisi, kuchengeteka, hutsika, rurimi rwekuvaka rakabudirira, rakarambidzwa zvachose kutumira, kunyora marara ekuzivisa.
Pakukudziridza unyanzvi hwokusarudza fence
One, kuti aone kugadzirwa kwefence mesh asi, kazhinji meshini yakasungirirwa ne zvakasiyana zvakasiyana-siyana zvematare, tsvina yakasimbiswa uye simba zvakananga zvine simba pamwero wevose mesh
Chechipiri ndechekuti chibatanidza kana teknolojia yekugadzira mesh, inowanzove yakatendeseka mesh inosungirirwa imwe neimwe kana chinangwa chokucheka chibvumirano chakanakisisa, hapana chibatanidzwa chechokwadi uye maitiro akafanana.
Piri, kusarudzwa kwemugadziro wekuvaka Fence, inowanzoita hurukuro inogadzirwa nehutori ndeyekutonga pamusoro pesimbi yeAngle uye yakagadzirwa nesimbi, zvisinei nsimbi yeAngle iyo inosarudza munzvimbo dzakawanda pamwe nesimbi yakafanana pamwe chete inofanira kuratidza kusiyana.
Tatu, PVC kuvaka fence yese spray technology inoshamisa, inofanirwa kubhadhara zvakanakira kuenzana kwepiritsi, uye ndeyokuti kunaka kwepende kuwedzerwa zvakanyanya.
Jovyea inyanzvi yekugadzira Chinese (factory / wholesaler / suppliers) iyo inofunganya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwePVC fence profiles.Indaneti yakashambadzirwa yakashambadza, yakanaka, yakanaka. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.